Muuri News Network » Muxuu Gudoomiye ku xigeenka Gobolka Sh/hoose Mudane Xassan Shiine u qabtay shacabka Sh/hoose (Warbixin)
Muxuu Gudoomiye ku xigeenka Gobolka Sh/hoose Mudane Xassan Shiine u qabtay shacabka Sh/hoose (Warbixin)
Jul 14, 2016 - 2 Jawaabood
Gudoomiye ku xigeenka xagga Maamulka iyo siyaasadda ee gobolka shabeelaha hoose Mudane Xassan Abuukar Jimcaale (Xassan Shiine) ayaa noqday halyeey usoo baxay shacabka kudhaqan Sh/hoose gaar ahaan degmada Marka iyo Deegaanada ku hareereesan.
Mudane Xassan Shiine ayaa layimid waxqabad muuqda mudada yar uu xilka hayo, wax yaabaha uu qabtayna waxaa ka mid ah; waxa uu muujiyay geesinimo ah u inuu qabto Magaalada Marka isla markaana usoo guurgalay xaaladaha dhabta ee Magaalada kajira.
Gudoomiyaha lashiray oo si hoose u xogwareystay odayaasha dhaqanka degmada Marka, haweenka, dhalinyarada, ururada bulshada iyo dhamaan waxgaradka kala duwan ee ku dhaqan degmada Marka.
Mudane Xassan shiine ayaa gargaar gaarsiiyay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeelaha hoose gaar ahaan; Muuri, No50, Gandaawo iyo deegaano kale.
Gudoomiye ku xigeenka ayaa ugudbiyay madaxda koonfurgalbeed iyo dowladda dhexe warbixin rasmi ah oo ka turjumeysa xaaladda dhabta ah ee kajirta gobolka gaar ahaan degmada Marka; intaasi ka dib gudoomiyaha ayaa codsaday ciidamo deegaanka ka socda in lageeyo degmada Marka si ay ula wareegaan amaanka degmada.
Gudoomiyaha ayaa inoo xaqiijiyay in maalmaha soo socdo ay Magaalada geyndoonaan ciidamdaas aan kor ku soo xusnay; isla markaana ciidamda deegaanka ee hadda kusugan No50 ilaa Marka xuquuqdooda u geed dheer iyo geed gaaban u fuuli doono oo ay heli doonaan tababar, mushaar, dhar ciidan, hub iyo gawaari intaba.
Sidoo kale gudoomiye Xassan Shiine ayaa sheegay in dhawaan mar labaad ay mucaawino gaarsoindoonaan degmooyin kake oo hoostaga degmada Marka.
Gudoomiye ku xigeenka ayaa sidoo kale si kulul uga hadalay kabixitaanka ciidamada mooryaanta militariga ee degmada Marka, waxa uuna cadeeyay in ay degmada kasaari doonaan militatiga ayna tahay wax aan la aqbali karin dhibaatada ay militariga ku hayaan shacabka Marka iyo joogitaankooda.
Mudane Xassan Shiine ayaa noqday masuul muddo gaaban lagu dareemay waxqabadkiisa iyo sida ay ugu go`antahay in uu dhibaatada ka saaro shacabka shabeelaha hoose; hadii uu kadhabeeyo in uu degmada Marka ku wareejiyo ciidamo police iyo nabadsugid tababaran Beesha Biimaalna ka soo jeeda ayaa noqondoonta guul uu soo hoyay mudane Xassan Shiine 25-kii sano uu dalka bur bur kujiray.
Maadaama siyaasiyiin badan oo horay xil u qabtay ay dhulka Beesha Biimaal u gacan geliyeen cadow ka soo duulay gobolo kale isla markaana aan u naxeyn shacabka maatida ee ku dhaqan guud ahaan gobolka shabeelaha hoose.
2 Responses to Muxuu Gudoomiye ku xigeenka Gobolka Sh/hoose Mudane Xassan Shiine u qabtay shacabka Sh/hoose (Warbixin)
14/07 at 2:15 pm
wixis qabtay wa aragnay heyadi so korisay aas kushegay dagaal oge doqon hadis jiro kana doqon ah xil walesku magacawa lkn sidan leskuma adegsado ilaahaw caqligisa uso celi
14/07 at 9:53 pm
geesiyo guuleyso horey Ayaan u ogeyn dad aan adinka aheyn in ay san jirin horeyna adinka ayaa u heyn jirey hogaanka hadane waa guul noo soo hoyatay marba haddii aad ku soo noqoteen horeyntii dalkiina iyo dadkiinaba ee geesiyoow waan kula jirnaa ee hogaanka noohay il xun Kuma argot cadawgaagan cusbo daad qaday ilaah ha ka yeelo ee geesiyoow waan kula jirnaaye hogaanka noohay noo jiraawo ee noo joogawo geesiyow